मल्टिपर्पोज फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, १९ चैत २०७५ )
कम्पनी पूँजीवृद्धिका लागि १ः८.६५ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारीमा छ । कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा जेठ २७ गते हकप्रद निष्कासनका लागि निवेदन दिएको थियो । सेबोनबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले रू. सय अंकित दरको ३५ लाख ८५ हजार २ सय ६४ कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । विक्रीप्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल लिमिटेड छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४ करोड १४ लाख छ । हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँट गरेपछि पूँजी रू. ३९ करोड ९९ लाख पुग्नेछ । कम्पनीको ३४ दिनको कारोबारमा शेयरमूल्य अधिकतम रू. १ सय ७४ र न्यूनतम रू. १ सय ३५ पुगेको छ ।
विक्री चाप: कम्पनीको सोमवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप बढी छ । सो अवधिसम्म २ सय २६ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो भने खरीद माग देखिएको छैन ।
2019-04-02 - 72 view(s) - abhiyan